नेयमारले गरे पिएसजीसँग थप ४ वर्षको सम्झौता, साताको कति पाउछन् ? Canada Nepal
नेयमारले गरे पिएसजीसँग थप ४ वर्षको सम्झौता, साताको कति पाउछन् ?
माघ २५ २०७७
काठमाडौं । विश्व चर्चित खेलाडी नेयमार अझै चार वर्षसम्म पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) मा रहने भएका छन् । उनले पीएसजीसँगको चार वर्षको सम्झौता गरेका छन् ।
यसअघि सन् २०१७ मा पीएसजीमा अनुबन्ध भएका नेयमारले प्रति साता ६ लाख पाउन्ड पाउने गरी सम्झौता थप गरेका हुन्।
पीएसजीले उनलाई थप ४ बर्षको लागि अफर गरेको थियो । उनी सन् २०१७ मा बार्सिलोनाबाट पीएसजीमा गएका उनी र पिएसजीको सम्झौताको कागजी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
गएको साता पनि ब्राजिलका पत्रकार मार्सेलो बेचलरले नेमार र पिएसजीसँगको सम्झौता हुन लागेको बारे बताएका थिए । यदि नेयमारले पीएसजीसँग सम्झौता गरेमा सन् २०२६ सम्म यहि क्लबमा रहनेछन् ।
उनी बार्सिलोनामा ४ बर्ष रहदा २ ला लिगा र एक च्याम्पियन्स लिग जितेका थिए । एक बर्ष अगाडि नेयमार बार्सिलोनामा जाने चर्चा थियो ।
माघ २५, २०७७ आइतवार १४:०८:१० बजे : प्रकाशित